भुल्केबाट कोरोनाविरुद्ध लड्न सिकियो : मन्त्री घिमिरे – OMKARTIMES
भुल्केबाट कोरोनाविरुद्ध लड्न सिकियो : मन्त्री घिमिरे
ओमकार टाईम्स २०७७ जेष्ठ २९
विराटनगर । प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले उदयपुरको भुल्केले कोरोनासँग लड्न धेरै सिकाएको बताएका छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री घिमिरेले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि भुल्केले धेरै कुरा सिकाएको बताएका हुन् ।
भुल्केबाट कोरोनासँग लड्ने र भिड्ने रणनीति बनाउन सजिलो भएको उनले बताए । भुल्केबाटै ‘थ्री–टी’ अर्थात् टे«सिङ, टेष्टिङ र ट्रिटमेन्टको काम सुरु गरेको बताए ।
भुल्केसँगै धनकुटा जिल्ला अस्पताल र दमकको संक्रमण पनि नियन्त्रण भएको उनले बताए । भुल्केको अनुभवले आत्मबल बढाउने काम भएको मन्त्री घिमिरेले बताए ।
प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सुरेश मेहताका अनुसार प्रदेश १ मा २९६ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । संक्रमित भेटिएका ८१ वटा स्थानीय तहमा १ सय १२ वटा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिमले काम गरिरहेको छ ।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा विभिन्न जिल्लामा संक्रमण देखिएका २ सय ५३ जना विदेशबाट आएको देखिएको उनले बताए ।
विदेशबाट आएकाहरुको सम्पर्कबाट ३० जनामा संक्रमण भएको उनले बताए । डा. मेहताले प्रदेश १ मा यूवा समूह २०–३० वर्षका सबैभन्दा बढी १ सय १६ जना संक्रमित भएको बताए । उनका अनुसार ६० वर्ष माथिका १ र बालबालिका २ जना छन् ।
कोरोना संक्रमितमध्ये ४ जनामा मधुमेह, १ जनामा उच्चरक्तचाप, २ जनामा थाइराइड र १ गर्भवती भएको बताइएको छ । ३ वटा आइसोलेसन अस्पतालहरुमध्ये विराटनगरमा २२ जना, धरानमा ५५ जना र सुन्दरहरैचामा ८१ जनाको अहिले उपचार भइरहेको छ ।
विपन्न परिवारको घर बनाउँदै राप्ती नगरपालिका
औषधि व्यवसायी आन्दोलित, बढाइएको राजस्व खारेज गर्नुपर्ने माग
बागलुङमा टेलिकमको सिमकार्ड अभाव
मापदण्ड विपरीत गिट्टी लोड गर्ने टिप्पर प्रहरी नियन्त्रणमा
Kathmandu – The families from marginalized community and people living with disabilities have been distributed relief materials to assuage their hardship in the wake of
चितवन । पूर्वी चितवनमा रहेको राप्ती नगरपालिकाले विपन्न परिवारका लागि घर निर्माणको काम सुरु गरेको छ । नगरपालिकाको खरका छाना विस्थापित गर्ने योजनाअनुसार नगरपालिकाका प्रत्येक
काठमाडौं । विभिन्न माग राख्दै औषधि व्यवसायीहरुले आज पनि आन्दोलन गरेका छन् । नेपालमा उत्पादन हुने औषधिहरुको आयातमा रोक लगाउनुपर्ने, स्थानीय औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने
बागलुङ – बागलुङ बजारमा नेपाल टेलिकमको प्रिपेड सिमकार्ड अभाव भएको छ । बिक्रेताले वितरक कम्पनीबाट सिमकार्ड उपलब्ध हुन नसकेको बताएका छन् । टेलिकमको प्रिपेड सिमकार्ड
नेपाल पत्रकार महासंघले केन्द्रीय समिति मातहत रहनेगरी पत्रकार आपतकालीन राहत कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । पत्रकारको दैनिक जीवनयापनमा समस्याका कारण पेशाबाटै पलायन हुनुपर्ने
ओमकार टाइम्स मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित
प्रबन्ध निर्देशक: केदार खड्का
प्रधान सम्पादक: जानुका निरौला
सम्पादक: सान नेपाल
कम्पनी दर्ता न.: २०९१५८/०७५/७६
सुचना बिभाग दर्ता न.: १३२१/०७५-७६
हामी सँग जोडिनुहोस्
©२०१९ सर्वाधिकार सुरक्षित